Tetikady Fampiasàna Finday Rehefa Mandray Anjarana Aminà Hetsi-Panoherana Am-Pilaminana · Global Voices teny Malagasy
Tetikady Fampiasàna Finday Rehefa Mandray Anjarana Aminà Hetsi-Panoherana Am-Pilaminana
Voadika ny 03 Jona 2011 4:54 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Français, English
Raha toa ianao mandray anjara aminà hetsika atao am-pilaminana amin'ny maha-mpanao gazety, mpiaro zon'olombelona, na mafàna fo, dia fitaovana sarobidy tokoa ny findainao. Fitaovana izy ahafahanao mifandray amin'ny namana, mandrakitra ny hetsika, ary ho vavolombelon'izay rehetra mitranga manodidina anao. Mandritra izany, tokony hitandrina zavatra vitsivitsy ianao amin'ny fampiasàna ny findainao sy ny fifandraisana. Ity toro-làlana manaraka ity izay nivoaka tao amin'ny Mobile Active [Ang] dia afaka manampy anao hampiasa tsara ny findainao mandritra ireo hetsika am-pilaminana sady, mandritra izany, miaro tsara koa ny tenanao.
Mandanjalanja ireo mety hateraky ny Finday
Anatin'ny ankabeazan'ireo hetsi-bahoaka, dia mety hiatrika an'ireto ianao:
Fahaverezana na fanagiazana ny findainao;
Fahatapatapahan'ny tolotra noho ny tsy fahalavorarian'ny fitaovana na ny tambajotra;
Fitsikilovana ny fifandraisanao.
Azo atao ny manamaivana ny dona tsirairay arakaraky ny fiomananao mialoha, fantaro ny findainao, sy ny fara-fahakeliny amin'ny fiasan'ny atao hoe fifandraisana amin'ny finday. Tadidio fa ny tranga rehetra dia samihafa avokoa ary ny finday dia fitaovan-tserasera tsy dia azo antoka loatra. Entaninay ianao hanopy maso ity Toro-làlana momba ny loza mitatao amin'ny Finday ity mba ho fitarihana misimisy kokoa amin'ny fandanjalanjana ny dona mety ho entin'ny findainao.
Fantaro ny Hasarobidin'ny Fanorotoroana ao amin'ny findainao
1. Lahatsary sy Saripika
Ireo lahatsary sy saripika alainao amin'ny maha-mpandray anjara anao mandrtra ny hetsika am-pilaminana dia tahirin-kevitra sarobidy. Ohatra, ndeha ataontsika hoe nisedra olana teny an-dalambe ianao ary afaka nandrakitra sombin-tsary ny zava-niseho ho ao anaty findainao. Iny porofo iny dia zava-dehibe mihitsy hanosehana izay vaovao diso mikasika hetsika iray na azo ampiasaina tsara hanaporofoana fa tena nisy tokoa ilay tranga. Ireo sombin-tsary dia mety ho azo ampiasaina ihany koa hanaporofoana ny zava-tsy nety nataon'olona iray (tahaka ny hoe manamboninahitry ny polisy ohatra).
2. Ny Momba Anao Manokana
Mitahiry zavatra betsaka momba anao manokana ny findainao. Jereo ny Toro-làlana momba ny loza mitatao amin'ny finday mba hahitàna ny pitsopitsony madinika mikasika ny zavatra voatahiry ao amin'ny findainao. Mety hirakitra ny lisitr'ireo mpifandray aminao ny findainao, ny hafatra nalefanao, ny antso natao, ny tahiry momba ny vohikala notsidihana, ny fitànana an-tsoratra, na ny tahirin-kevitrao.
Io karazana io dia mety hanohintohina ny asanao sy ny tambajotranao. Mety hitranga ny fampiasana azy amin'ny tsy tokony ho izy ka tsy tokony mihitsy ho azon'ny olon-kafa jerena izany raha tsy nahazo alalana avy aminao. Mandrakariva dia tokony ho fantatrao foana ny votoaty anananao ao anaty finday ao ary mampiasà izay fiarovana azo atao (toy ny ‘code pin’, ny fitendry manidy tena, ny finday manidy tena, ‘code de verouillage'… sns). Hamoaka toro-làlana manokana momba ny Fanidiana (Fiarovana) misy sy azo ampiasaina ao amin'ny findainao izahay.
Inona No Hatao Alohan'ny Hanatevenan-Daharana Hetsika am-Pilaminana Iray
Ireto soso-kevitra manaraka ireto dia hanampy anao hanao izay haha-mari-toerana ny fifandraisanao sy hiarovana ny votoaty avy aminao:
1. Manaova Tahiry amin'ireo Votoatin'ny Findainao
Mety ho very mora foana ny findainao ao anatinà hetsika iray (mety ho latsaka, nisy nangalatra, notazonin'ny manampahefan'ny polisy, nendahan'olona). Manaova tahiry ivelany an'ireo votoatin'ny findainao any anaty solosaina azo antoka any. Kendreho tsara ho voarakitra ny mpifandray amin'ny tena, ny hafatra, ny fidirana, ny media, ary izay rehetra votoaty heverinao fa manan-danja lehibe. Avy eo, azonao atao ny mi-formater ny findainao, mamafa ny votoaty sy izay rehetra noraketina. Aorian'ny hetsika dia azonao atao tsara ny mamerina ireo votoaty avy any amin'ny tahiry nataonao hiverina ho ao anatiny indray.
2. Mitondrà Vatoaratra Fiandry Ho an'ny Findainao
Na dia mihevitra aza ianao fa mahafantatra ny mety ho faharetan'ilay hetsika, sarotra ny maminavina ny mety ho fivoaran'ny raharaha. Mety ho zavatra maro no ampiasànao ny findainao ary dia mety ho vizana ny vatoaratrao. Mitondrà mandrakariva any aminao any vatoaratra iray fanampiny ary ny famahanana azy, raha azo atao. Ianaro ny manolo amin'ny fomba haingana ny vatoaratry ny findainao.
3. Raiso anaty Taratasy ny Zava-dehibe
Soraty anaty taratasy ireo fifandraisana manana ny toerany manokana ary ento miaraka aminao satria mety ho very ny findainao ary ilainao ny fahafahana mijery maika izay fifandraisana maika izay. Ohatra, soraty ny fomba azo ifandraisana amin'ny fianakavianao, ny mpisolovava, mpitsabo, mpanao gazety ary ireo fikambanana mpiaro ny zon'olombelona.
4. Asio Fahana ny Findainao
Raha mampiasa ny tolotra fahanana ianao, aza adino mihitsy ny mamahana ny SIM findainao. Tsy fantatrao na ho firy na ho firy ny antso tsy maintsy hataonao, na ny haben'ny votoaty hampakarinao anaty aterineto.
5. Jereo ny Tanjaky ny Tambajotra
Raha azo atao, tsidiho mialoha ny toerana voatondro hanaovana hetsika ary tadiavo izay toerana ahafahana mahazo ny tsara indrindra amin'ny tambajotra, ny eo ho eo ihany, ary ny ratsy indrindra. Raha mieritreritra ny hampiasa fitaovana misy WIFI ianao, tadiavo koa izay toerana (sy ny fahazoana antoka!) misy mari-pamantarana fisianà tambajotra Wifi misokatra.
6. Fifandrohizan'ny famoahana lahatsoratra
Raha mihevitra ny hampakatra fanavaozana ao amin'ny Facebook ohatra ianao, na Twitter, na mihevitra ny hampakatra sary ao amin'ny Flickr na Twitpic, ampifandrohizo ny kaontinao mba ho azo antoka fa hihanaka ary hivezivezy ny votoaty nalefanao any anatin'ny vondrom-piarahamonina samihafa anaty aterineto any vantany vao mandefa fanavaozam-baovao na sary ianao, na manomboka fampitàna mivantana. Raha miahiahy ny amin'ny maha-azo antoka na tsia io fomba io ianao, dia azonao atao,mialoha ilay hetsika, ny mieritreritra mamorona kaonty manokana tsy ilazalazana ny momba anao ao anaty vohikala.
7. Ataovy ho Pejy Ankafizina
Aza adino ny mametraka ho pejy ankafizina ireo rohy mankany amin'ny vohikala sosialy sy fitaovana anaty aterineto eritreretinao hampiasaina. Tsarovy ny mametraka ho pejy ankafizina ny dika natao ho an'ny finday amin'ireo vohikala sosialy (ohatra, http://m.facebook.com, http://m.flickr.com, http://m.twitter.com… etc).
Fantaro ny Findainao
1. Trandraho ny Fitendry Amin'ny Findainao
Azonao atao ny mampihena ny fahafahana mitsikilo ny fampiasànao ny findainao raha fantatrao ny fomba fanelezana ny tarehin-tsoratra sy tarehimarika avy amin'ny fitendry eo amin'ny findainao. Maro ny olona afaka manindry tsy an-kijery ny hoe “K'aiza, manakory ianao” amin'ny fitendrin'ny solosaina rehefa miresaka mivantana. Mila koa ianao mahay manoratra hafatra fohy (SMS) tsy an-kijery avy amin'ny findainao. Raha efa zatra tsara ny fitendry amin'ny findainao moa ianao, dia ho afaka mandefa hafatra tsy ilàna akory ny fanopaza-maso ny fitendry.
Azonao atao ny mitsitsy fotoana sy hasasarana amin'ny fahafantarana hintsin-dàlana. Maro ny finday no manana hintsin-dàlana fidirana amin'ireo tolotra maro ao anatiny, toy ny hintsin-dàlana fandefasana avy hatrany ny fakantsary ohatra. Fantaro ary ianaro tsianjery ireo hintsin-dàlana ireo mba hahafahanao mandefa azy tsy ankijery amin'ny fotoana ilàna azy. Raha azo atao, mamorona hintsin-dàlana. Amin'ny finday sasany, mila fotsiny ianao mandamina ny filaharan'ireo kisary ao anatin'ny menu-n'ny findainao amin'ny fampivadiana azy aminà tarehimarika eo amin'ny fitendrin'ny findainao.
2. Trandraho ny Fakantsarin'ny Findainao
Fantaro izao fomba azo itrandrahana msimisy kokoa ny fakantsarin'ny findainao mba hanaovanao izay tianao amim-pitoniana sy araka izay vokatra irina. Mifankazàra amin'ny fomba fiasan'ny fakantsarinao ary ny fomba hifehezana ny zavatra rehetra azony omena. Mety ho voasambotra ianao raha maka sary polisy iray eo am-pidarohana olona, ka nitselatra nanaitra ilay manampahefana ny jiro fanazavan'ny fakantsarinao. Ny feo avoakan'ny fakantsarinao rehefa manindry bokotra koa dia mety hisarika ny saina ho any aminao ka ilaina araka izany ny hanomananao mialoha ny fomba fiasany mba hisorohana ny mety hanamarihan'ny sasany anao.
Inona no Tokony Hatao Mandritra Ilay Hetsika Am-Pilaminana
1. Lanjalanjao ny Dona Ara-Batana Mety Hahazo Anao sy ny Fisian'ny Polisy
Ny fiarovana ny tenanao foana aloha no voalohan-daharana rehefa maka sary na lahatsary any anatinà hetsika am-pilaminana iray, na mandefa hafatra sms sy fanavaozana anaty vohikala. Fantarina ny elanelana misy anao amin'ireo mpitandro filaminana sy ireo hery mpandrava korontana, sy ny hoe akaiky fiaran'ny polisy ve sa tsia. Ny tsara indrindra (Idealy), tsidiho ny toerana, mialoha ny hanaovana ny hetsika, mba hizàrana sahady ny faritra sy ny làlana raha sendra mitranga ny herisetra. Tsy voatery hisavoritaka ianao. Sokafy fotsiny ny masonao.
2. Lanjalanjao ny Fandrakofan'ny Tambajotra sy ny Fahafahana Miditra amin'ny Aterineto
Alohan'ny hanapahanao hevitra hampakatra fanavaozam-baovao amin'ny Twitter na hanao fampitàna mivantana miaraka amin'ny fitaovana toy ny Bambuser, jereo aloha raha tsara toerana mahazo fandrakofana tsara avy amin'ny tambajotra ka mahazaka tsara ny zavatra tianao hatao ao anaty aterineto ianao. Ataovy an-tsaina fa mety ho tapaka tampoka izay fandrakofana izay. Ataovy azo antoka tsara ny fampitàna mivantana ataonao ary efa namorona mialoha kaonty ho an'ilay hetsika ianao. Ity toro-làlana ity dia mety hanampy anao amin'ny fampiasàna ny Bambuser sady hahita fitaovana hafa ihany koa ianao ato.
3. Mifidiana Tetikady
Azonao atao ny mandrakitra amin'ny fomba samihafa ny hetsika am-pilaminana iray (amin'ny SMS, lahatsary, ary saripika). Tsy maintsy manapa-kevitra ny amin'izay hataonao ianao mifanaraka amin'ny zava-mitranga atrehana.
Raha tony ny raharaha dia azonao atao ny maka sary sy mandefa sms fanavaozam-baovao.
Raha mitranga ny korontana dia azonao atao ny mamelona ny camera ary manomboka mandrakitra anaty lahatsary ny hetsika. Raha tsara vintana ianao ka misy fahafahana mahazo aterineto dia afaka manao fampitàna mivantana izay mitranga. Raha te-hampahafantatra ny namanao, ny mpisolovava na olon-kafa mikasika ny zava-mitranga ianao, amin'ny alalan'ny sms, andramo ny manao izany tsy mijery ny fitendry.
Torohevitra 10 Mahasoa
Aza dia miantso betsaka rehefa anaty fihetsiketsehana am-pilaminana. Tsara kokoa ny mandefa ny vaovao amin'ny alalan'ny SMS. Manafaingana ny fampitanao vaovao miainga amin'ny iray-ho-amin'ny maro ny fampiasàna SMS, fotoana fohy monja sy tsy manasatra, ary tsy dia mandany vatoaratra firy loatra amin'izany. Ampidiro anaty kajikajy fa mety hisy fahataràna ny fahatongavan'ny hafatrao noho ny olan'ny tambajotra (na izany mitranga noho ny fitohanan'ny tambajotra noho ny habetsahan'ny hafatra mandeha, na fanahy iniana ataon'ny mpitandro filaminana) ary mety ho eo ambany fanaraha-maso ny fifandraisanao amin'ny finday.
Fotsio isaky ny afaka manao izany ny ‘carte memoire’ ao anaty findainao (na ny fakantsary) mba hahafahanao mitahiry tsy miato ireo sary sy lahatsary azonao mandritra ilay fanehoan-kevitra na hetsi-panoherana. Raha azo atao, mitondrà ‘cartes memoires’ maromaro hampiasaina rehefa misy ilàna azy. Ianaro ny manolo tsy ankijery sy amin'ny fomba haingana ny ‘carte memoire’ ao anaty findainao ary mitahiry ireo ‘cartes memoires’ feno amin'ny toerana azo antoka raha sanatria ka misy ny fisamborana anao.
Andramo ny mampakatra ao amin'ny aterineto izay sary rehetra anananao ao anaty finday vantany vao manana fahafahana miditra amin'ny aterineto ianao mba hisorohana ny fahaverezan'ireo votoaty raha sanatria ka very ny finday. (Azonao atao ny mampakatra izany ao amin'ny http://m.twitpic.com/upload na http://m.flickr.com/#/upload, ohatra.)
Mitondrà ‘carte SIM’ fiandry any aminao any. Amin'ny tranga sasany, tapahan'ny tompon'ny tambajotra ny fifandraisan'ireo mafàna fo fantatr'izy ireo na ireo olona efa voakendry manokana. Raha inoanao fa isan'ireo voakendry ny laharanao, ka manana fahafahana manao izany ianao, mitondrà ‘carte SIM’ fanampiny. Raha tsinjonao fa tsy mandeha ilay tolotra mahazatra anao, andramo ny miova SIM. Ny fanovàna ny SIM tsy midika fa hoe lasa miafina ny anaranao rehefa mampiasa ilay finday. Azo arahana foana ny findainao amin'ny alalan'ny laharana tokana ao anatin'io finday io ary, mazava ho azy, any anatin'iny SIM ampidirinao iny.
Ataovy amin'ilay fomba ‘mangina / silencieux’ ary asio hovitra (vibreur) ny findainao. Tsy ilaina ny misarika ny sain'ny olon-kafa manodidina anao.
Ny finday sasany dia misy fiarovana amin'ny alalan'ny fanakatonana baikoina lavitra. Manome anao fahafahana manidy ny findainao izany, amin'ny alalan'ny fandefasana SMS manokana izay efa nomaninao mialoha hankany amin'ilay findainao raha sanatria very tampoka ilay izy. Ohatra, raha nisy manampahefan'ny polisy naka ny findainao dia lasa izy nandeha, azonao atao ny mandefa fotsiny SMS avy aminà finday hafa miaraka amin'ny tenimiafina manokana mba hanakatonana ny findainao.
Raha nihevitra ny hampakatra ny votoaty ho ao anaty aterineto ianao, soraty anaty SMS iray ireo rohy sarobidy ary tehirizo ho toy ny vakiraoka iny. Azonao atao avy eo ny manao dika-petaka fotsiny ireo rohy raha toa ka misy an'izay rindrambaiko izay ny findainao.
Raha efa ao anaty fandaharanao ny handefa hafatra manokana ho an'olona iray, omano ao anaty vakiraoka izany. Manampy anao hitsitsy fotoana izany, ary ny manindry ny hoe ‘alefaso’ sisa no hataonao rehefa te-handefa azy. Ohatra, azonao soratana ny hoe “voasambotra” arahan'ny anaranao ao anaty hafatra iray ary maka ny adiresin'ny andefasana sy mitahiry azy ho vakiraoka.
Ataovy anaty kajikajy ireo rindrambaiko ao anaty finday toy ny SaferMobile InTheClear. Ny InTheClear dia mamela anao hanomana mialoha SMS ho an'ny hatairana (Shout!) miaraka aminà ‘menu’ tokana sy tsotra (Panic!). Ny InTheClear koa dia ahafahanao mamafa mangingiana ny tahirin'adiresy ao anatin'ny findainao (Wipe!), raha sanatria ka alaina aminao izy io. Azonao atao ny mahalala bebe kokoa momba ny IntheClear eto ary miditra ho mpikambana tahaka ny hoe mpanandrana ny dika beta aminy.
#AfricansInUkraine (AfrikànaAoOkraina): Mpianatra izahay, tsy manana fitaovam-piadiana
Afrika Mainty 15 Marsa 2022
Mety ho lakilen'ny fampitsimbadihana ny politika tratra aoriana ao Afovoany Atsinanana ve ny fikatrohana hiaro ny zon'ny LGBTQ+?
Afganistana 11 Novambra 2021
Fahalalahàna miteny 07 Oktobra 2021